Ra’iisul Wasaare Khayre Iyo Madaxweyne Ku-Xigeenka Midawga Yurub Oo Brussels Ku Kulmay. – Al-Hurriyah
Brussels, Khamiis, Nofeembar 14, 2019—Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne ku-xigeenka midawga Yurub, Federica Mogherini ayaa Kula kulmay magaalada Brussels ee xarunta midawga Yurub.
Kulanka ayaa looga hadlay xariirka xooggan ee ka dhexeeya midawga Yurub iyo Soomaaliya, nabadda, amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo taageerada xoojinta dimuquraadiyadda.
Federica Mogherini oo sidoo kale ah wakiilka midawga Yurub ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga ayaa adkeysay sida ay midawga Yurub ka go’antahay in Soomaaliya ay ku taageeraan hiigsigeeda dhismaha Soomaaliya ku tillaabsata siyaasad loo dhanyahay, amni, dhaqaale ahaanna horumarsan oo ka faa’iideysata bulshadeeda hal abuurka leh ee dhallinyarada u badan iyo khayraadkeeda dabiiciga ah.
Ambassador Tarsan “Ma dhicin kulan dhex maray Madaxweyne Farmaajo iyo Safiirka Mareykanka”
Safiirka Dowladda Soomaaliya u fadhiya Kenya ayaa ku tilmaamay waxba kama jiraan wararka ku aadan in…
Ramla Cali oo ah gabar Soomaaliyeed ayaa usoo baxday Rubuc dhamaadka Isreebreebka Feerka Afrika ee loogu soo gudbayo Ciyaaraha Olambikada Adduunka ee magaalada Tokiyo ee Cariga Jabaan, kaasi oo lagu qaban doono sanadkan 2020-ka. Ciyaartaasi oo ka dhacday…
Ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa xoogga dalka ayaa howlgallo ka dhan ah Al-shabaab ka wada duleedka magaalada Jowhar oo xalay weerar iyo dagaal toos ah uu ku dhamaray ciidanka xoogga iyo xarakada Alshabaab . Dagaalka xalay dhax…
Maxamed Xaaji Axmed oo loo yaqaanay dhowr naaneys sida Ilkacase, Daahir Xudeyfa iyo Caddaawe waxaa uu ahaa Macalin Iskuul caan ka ah Muqdisho oo lagu magacaabo Macalinkan ayaa isu bedelay Madaxii Kooxda Khaarijinta Al-Shabaab ee Muqdisho oo loo…